Samuel Nhoma a Edi Kan 12:1-25
Samuel nsɛm a etwa to (1-25)
‘Munnni ahuhude akyi’ (21)
Yehowa rennyaw ne man (22)
12 Afei Samuel ka kyerɛɛ Israel nyinaa sɛ: “Nea moka kyerɛɛ me nyinaa mayɛ,* na mapaw ɔhene a obedi mo so.+ 2 Ɔhene a obedi mo anim no ni!+ Me de, mabɔ akwakoraa na mafuw dwen, na me mma nso, wɔne mo na ɛwɔ ha yi;+ efi me mmofraase na madi mo anim abesi nnɛ.+ 3 Me na migyina ha yi. Monka wɔ Yehowa ne nea wasra no+ yi anim: Hena nantwi anaa n’afurum na magye?+ Hena na masisi no anaa mahyɛ no so? Hena nsam na magye adanmude* de akyea atemmu?+ Sɛ mayɛ biribi saa a, monka na metua ka.”+ 4 Ɛnna wɔkae sɛ: “Wunsisii yɛn, na wonhyɛɛ yɛn so. Wunnyee hwee nso mfii obiara hɔ.” 5 Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnnɛ Yehowa ne me dansefo wɔ mo anim, na nea wasra no yi nso yɛ me dansefo sɛ moannya me ho asɛm biara.”* Ɛnna wɔkae sɛ: “Ɔyɛ wo dansefo.” 6 Na Samuel ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Yehowa a ɔpaw Mose ne Aaron, na oyii mo agyanom fii Egypt asaase so+ no, ɔno ne me dansefo. 7 Enti afei munnyinagyina ha, na adetrenee a Yehowa ayɛ ama mo ne mo agyanom nyinaa nti, mimmu mo atɛn wɔ Yehowa anim. 8 “Bere a Yakob baa Egypt,+ na mo agyanom fii ase su frɛɛ Yehowa+ ara pɛ, Yehowa somaa Mose+ ne Aaron ma wodii mo agyanom anim fii Egypt de wɔn bɛtenaa ha.+ 9 Nanso wɔn werɛ fii Yehowa, wɔn Nyankopɔn, enti ɔtɔn wɔn+ maa Hasor sahene Sisera+ ne Filistifo+ ne Moab hene,+ na wɔne wɔn koe. 10 Ɛnna wosu frɛɛ Yehowa+ sɛ, ‘Yɛayɛ bɔne,+ na yɛagyaw Yehowa akɔsom Baal anyame+ ne Astoret+ ahoni. Afei gye yɛn fi yɛn atamfo nsam na yɛnsom wo.’ 11 Na Yehowa somaa Yerubaal+ ne Bedan ne Yefta+ ne Samuel,+ na ogyee mo fii mo atamfo a wɔatwa mo ho ahyia nsam ma motenaa ase dwoodwoo.+ 12 Bere a muhui sɛ Ammonfo hene Nahas+ aba mo so no, moka kyerɛɛ me sɛ, ‘Daabi, yɛn de, ɔhene ara na yɛpɛ!’+ Nanso saa bere no, na Yehowa, mo Nyankopɔn na ɔyɛ mo Hene.+ 13 Enti afei ɔhene a moapaw no, nea mubisae no ni. Hwɛ! Yehowa asi mo so hene.+ 14 Sɛ musuro Yehowa+ na mosom no,+ na mutie ne nne,+ na mudi Yehowa ahyɛde so, na mo ne ɔhene a obedi mo so no nyinaa di Yehowa, mo Nyankopɔn ahyɛde so a, ebesi mo yiye. 15 Nanso sɛ moantie Yehowa nne na mubu Yehowa ahyɛde so a, Yehowa nsa bɛba mo ne mo agyanom so.+ 16 Afei munnyinagyina ha na monhwɛ ade kɛse a Yehowa rebɛyɛ wɔ mo anim yi. 17 Ɛnyɛ hwiit twabere mu na yɛwɔ yi? Mɛsrɛ Yehowa na wama aprannaa abobom na osu atɔ; na mubehu sɛ ɔhene a mubisae nti, moayɛ bɔne kɛse wɔ Yehowa ani so.”+ 18 Ɛnna Samuel srɛɛ Yehowa, na Yehowa maa aprannaa boboom na osu tɔe saa da no, enti ɔman no nyinaa suroo Yehowa ne Samuel paa. 19 Na ɔman no nyinaa ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Bɔ Yehowa, wo Nyankopɔn mpae ma wo nkoa,+ na yɛmpɛ sɛ yewuwu, efisɛ yɛn bɔne nyinaa akyi no, yɛasan ayɛ bɔne kɛse aka sɛ yɛpɛ ɔhene.” 20 Ɛnna Samuel ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Munnsuro. Bɔne no de, moanya ayɛ. Nanso monhwɛ na moamfi Yehowa akyi,+ na mmom momfa mo koma nyinaa nsom Yehowa.+ 21 Monhwɛ na moankodi ahuhude* akyi;+ mfaso biara nni so,+ na entumi nnye nkwa, efisɛ ɛyɛ ahuhude.* 22 Na Yehowa din kɛse no nti,+ ɔrennyaw ne man,+ efisɛ Yehowa asi ne bo sɛ ɔde mo bɛyɛ ne man.+ 23 Na me nso, ɛmpare me sɛ mɛyɛ Yehowa bɔne aka sɛ meremmɔ mpae mma mo bio. Mɛkɔ so akyerɛ mo nea eye ne ɔkwampa a mobɛfa so. 24 Mo de ara ne sɛ mubesuro Yehowa+ na mode mo koma nyinaa asom no wɔ nokwaredi mu; monkae nneɛma akɛse a wayɛ ama mo no.+ 25 Nanso sɛ musi mo bo sɛ bɔne ara na mobɛyɛ a, ɛnde mo ne mo hene nyinaa,+ wɔbɛpra mo akɔ.”+
^ Nt., “matie mo.”
^ Nt., “moanhu hwee wɔ me nsam.”
^ Anaa “adehunu.”